Mi A1 Oreo Root + Myanmar Font - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Android Application Mobile Fonts Phone Application Xiaomi မြန်မာဖော့င် Mi A1 Oreo Root + Myanmar Font
Mi A1 Oreo Root + Myanmar Font
Anonymous at 3:09:00 PM Android Application, Mobile Fonts, Phone Application, Xiaomi, မြန်မာဖော့င်,
Mi A1 ဖုန်းတွေ Root မဖောက်ခင် build no အရင်စစ်ပါ build no မတူတာ root လျှင် wifi error , sensor တက်တတ်ပါတယ်။ ယခုတင်ပေးသော root သည်
V9.5.4.0 (Feb 1 2018) V9.5.9.0 (Mar 1 2018) V8.1.1.0 (Jan 1 2018)
Version မမြှင့်ရသေးလျှင် http://en.miui.com/download-333.html မှာဒေါင်းတင်ပါ။
Root နည်း ======= Pin Pattern Password ရှိလျှင် ဖြုတ်ထားပါ OEM Unlock On ထားပေးပါ
1. USB Debugging On ပြီး ကြိုးထိုးပေးပါ 2. Mi A1 root.bat ကိုဖွင့် ပြီး သက်ဆိုင်ရ build no အလိုက် root ပါ 3. ဖုန်းပိတ်သွားပြီးပြန်ပွင့်လာလျှင် Root ရပါပြီ 4. Root ရလျှင် Font Change ကိုနှိပ်ပြီး ဖောင့်ချိန်းပါ
Camera လေးနေသော error fix ရန်အတွက် ======================== အင်တာနက်ဖွင့်ထားပါ Magisk Manager ကိုဖွင့်ပါ အပေါ်ကအချောင်းသုံးခြောင်းနှိပ်ပြီး Download ထဲဝင်မှာ search box မှာ Mi A1 ရိုက်ရှာပါ Mi A1 Oreo cam fix ကို download ပြီး install ပေးပါ ပြီးလျှင် reboot နှိပ်ပါ ဖုန်းပြန်တက်လာလျှင် fix ပါပြီ
Magisk Manager ကိုဖွင့်ပါ အပေါ်ကအချောင်းသုံးခြောင်းနှိပ်ပြီး Modules ထဲဝင်ပါ အောက်ကအပေါ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့အထဲက MI_A1_Camera_Lag_Fix_Oreo-v1.1.zip ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
Video : https://youtu.be/Jn-Bkp1sb4M Download file : http://www.mediafire.com/?5m6bgtj5jck96vk
Thanks To JWK ( Official Warranty )
Password ကို post အောက်ဆုံးမှာ ယူပါ
Than Toe Aung Mobile Phone Services & Training Mandalay မှ အတန်းခွဲ အမှတ်စဉ် (၈) သင်တန်း ၄ လပိုင်း (၂၆) ရက်နေ့ ၂၀၁၈ မှာစပါမယ်
သင်ကြားမည့်သင်ခန်းစာ များ . အခြေခံ CPU အကြောင်းများရှင်းလင်းခြင်း သင်ရိုးကို Phone Model မသင်ကြားပဲ Platform ဖြင့်သင်ကြားမှုကြောင့် ဘယ်ဖုန်းမော်ဒယ်မဆို ပြုပြင်နိုင်ခြင်း Theory ကိုဦးစားပေးပြီး သင်ကြားခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် အလွယ်တကူနားလည် သဘောပေါက်နိုင်ခြင်း . ဆော့ဝဲနည်းပညာများဖြစ်တဲ့
Firmware တင်ခြင်း FRP , Mi Account Lock , userlock ect.. လော့အမျိုးမျိုးဖြေခြင်း dead နေသောဖုန်းများအား dead နှိုးခြင်း အင်တာနက် အကောင့် နှင့် Download ပိုင်ဆိုင်ရာ Firmware များ tool များ ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေခြင်း အကောင့်ဖွင့်ခြင်းများ Solution ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေခြင်း အင်တာနက်ကိုဆရာကျကျအသုံးပြုနည်းများ . Windows တင်ခြင်းနှင့် Computer Windows အကြောင်းသေချာရှင်းပြခြင်း Driver Error များ Fix လုပ်ခြင်း Virus ကာကွယ်ခြင်း Windows ကိုဆရာကျကျ အသုံးပြုခြင်းများ . Qualcomm CPU သုံးဘယ်ဖုန်းမဆို လိုင်း (Network) Fix ခြင်း Firmware တင်ခြင်း Firmware backup ထုတ်ခြင်း ပြန်သွင်းခြင်း Block0 backup restore လုပ်ခြင်း emmc အလွတ်ကပ်ပြီးစက်နှိုးခြင်း ect... . MTK CPU သုံးဘယ်ဖုန်းမဆို လိုင်း (Network) Fix ခြင်း Firmware တင်ခြင်း Firmware backup ထုတ်ခြင်း ပြန်သွင်းခြင်း IMEI ရေးခြင်း , Dead မဖြစ်အောင် ကာကွယ် နည်းများ , Dead သွားလျှင် ပြန်လည်ကယ်ဆယ်ခြင်း . Spreadtrum ဖုန်းများ Firmware ရေးခြင်း Firmware backup ထုတ်ခြင်း IMEI ပြန်ရေးခြင်း Firmware ရှာနည်းများ . Clone ဖုန်းများနှင့် အမျိုးအမည်မသိ tablet များ Model အမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် မ dead အောင် ကာကွယ်ရှောင်ရှားနည်း Deadfix ခြင်းနှင့် Firmware တင်ခြင်းများ ect... . အစရှိသော သင်ခန်းစာများနှင့်ဆားဗစ်လောက်ကမှာ ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲပေါင်းများစွာ ကိုဖြေရှင်းနည်းများ . ဘယ် Android ဖုန်းမဆို Root ဖောက်နည်းများ Root မလိုပဲ မြန်မာစာရအောင်လုပ်ခြင်း လော့အမျိုးမျိုးဖြေခြင်းများ . Phone Partition များအလုပ်လုပ်ပုံနှင့် Userdata မပျက်အောင် lock ဖျက်နည်းများ . bootloader unlock လုပ်နည်းများနှင့် custom recovery , stock recovery custom roms , custom rom zip root zip ect... flash နည်းများ . box crack , dongle crack အသုံးပြုနည်းများ နှင့် box , dongle လမ်းညွှန် . SAMSUNG Firmware အမှန်ဒေါင်းနည်း မြန်မာစာ built in ပါသော Firmware တည်ဆောက်နည်း model နှင့် region သေချာစစ်ဆေးနည်း dead မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ရှောင်ရှားတင်နည်းများ , FRP Lock ဖြုတ်ခြင်း Custom Binary Block , bootloop , IMEI fix , TWRP Myanmar Font , Root ect,,, . အခြေခံ မှ လက်ရှိထွက်နေသော ဆော့ဝဲနည်းပညာ အစုံအလင် ကို ဆရာ သန်းတိုးအောင် မှ အသေးစိတ်လက်တွေ့ကျကျ သင်ကြားပြသပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ . ဒီသင်တန်းလေးကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်တက်သင့်လဲ? သင်တန်းပြီးဆုံးသွားလဲ Online Group ထည့်ပေးထား ခြင်းကြောင့် update နည်းပညာများ အဆက်မပျက်ခြင်း Update DATA များ အချိန်မရွေးအခမဲ့လာရောက်ကူး ယူနိုင်ခြင်း နေ့စဉ်သင်ကြားမှု main point များ Video rec လုပ်ထားပေးခြင်း သင်ကြားမှုတဝက် လက်တွေ့တဝက်ဖြင့် သင်ကြား ခြင်းကြောင့် တက်မြှောက်လွယ်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်..
သင်တန်းတည်နေရာ . ၂၇ လမ်း ၆၉ လမ်း နှင့် ၇၀ ကြား 27 Cafe နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆက်သွယ်ရေး ဝင်းအတွင်း တိုက် ၂ အခန်း ၄ မန္တလေးမြို့ . သင်တန်းကြေး (၂) သိန်း ကျပ် . အချိန် နေ့လယ် (၁၂) နာရီ မှ ညနေ (၄) နာရီထိ . သင်တန်းကာလ (၁) လ .
Data 4TB ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Firmware အစုံ + Movies + Mp3
Ph 0941005703 / 09250248011
Facebook Account fb.com/thantoeaungat Than Toe Aung
Password = ttamia1oreo
Android Application, Mobile Fonts, Phone Application, Xiaomi, မြန်မာဖော့င်
Android Application Mobile Fonts Phone Application Xiaomi မြန်မာဖော့င်